အဆိုပါ Analog စအရွယ်များတွင်အများဆုံးလူမှုရေးသုတေသနတစ်ဦးအတော်လေးန့်အသတ်အတိုင်းအတာရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအစုတခုအတွင်း operated ။ ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်များတွင်လူမှုရေးသုတေသနကွဲပြားခြားနားသည်။ သုတေသီများ-မကြာခဏကုမ္ပဏီများနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. အတိတ်ကာလထက်သင်တန်းသားများကိုကျော်ပိုပြီးပါဝါအစိုးရများ-ရှိသည်, အာဏာကိုအသုံးပြုရပါမည်ဘယ်လိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးဖြစ်ကြသည်။ တန်ခိုးတော်အားဖြင့်ငါရိုးရှင်းစွာသူတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်သို့မဟုတ်ပင်အသိပညာမပါဘဲလူတွေကိုအမှုတို့ကိုပြုနိုင်စွမ်းကိုဆိုလိုတာ။ သုတေသီများသည်လူများတို့အားလုပျနိုငျသောအရာများ၏မျိုးဟာသူတို့ရဲ့အပြုအမူစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ချက်မှာသူတို့ကိုမအပ်နှံပါဝင်သည်။ စောင့်ထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းမှသုတေသီများ၏တန်ခိုးတိုးပွားလာနေသည်နှင့်အမျှအာဏာကိုအသုံးပြုရပါမည်ဘယ်လိုရှင်းလင်းပြတ်သားတစ်ခုညီမျှတိုးပေးခြင်းမရှိပေ။ တကယ်တော့သုတေသီများကိုက်ညီမှုများနှင့်ထပ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ, ဥပဒေများနှင့်စံချိန်စံညွှန်းအပေါ်အခြေခံပြီးသူတို့ရဲ့အာဏာကိုကငျြ့သုံးဖို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရပေမည်။ အစွမ်းထက်စွမ်းရည်နှင့်မရေလမ်းညွှန်ချက်၏ဤပေါင်းစပ်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေဖန်တီးပေးပါတယ်။
သုတေသီများသည်ယခုရှိသည်သောအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုမှာ set ကိုသူတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်သို့မဟုတ်အသိအမြင်မရှိဘဲလူတွေရဲ့အပြုအမူကိုစောငျ့ရှောကျဖို့စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသီများသင်တန်း၏, အတိတ်၌ဤပြုတတျနိုငျသပေမယ့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်, scale, ကြီးမားတဲ့ data တွေကိုသတင်းရင်းမြစ်အများအပြားပရိတ်သတ်တွေအားဖြင့်ထပ်တလဲလဲကိုကြွေးကြော်ခဲ့ပြီးတစ်ဦးအချက်ကိုလုံးဝကွဲပြားခြားနားသည်။ ကျနော်တို့အစားတစ်ဦးချင်းကျောင်းသားသို့မဟုတ်ပါမောက္ခ၏စကေးအနေဖြင့်ရွှေ့နှင့်ဆိုပါကအထူးသဖြင့်, အရာနှင့်အတူသုတေသီများ ပို. ပို. ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်-အလားအလာကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုရှုပ်ထွေးဖြစ်လာမယ့်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အစိုးရ-အဖွဲ့အစည်းများ၏စကေးစဉ်းစားပါ။ ငါကလူအစုလိုက်အပြုံလိုက်စောင့်ကြည့်၏စိတ်ကူးမြင်ယောင်ကူညီပေးသည်ထင်တစ်ခုမှာဥပစာအဆိုပါ panopticon ဖြစ်ပါတယ်။ မူလကအကျဉ်းထောင်တစ်ခုဗိသုကာအဖြစ်ဂျယ်ရမီ Bentham အားဖြင့်အဆိုပြုထားသည် panopticon ဗဟိုကင်းမျှော် (ပုံ 6.3) ဝန်းကျင် built ဆဲလ်နဲ့မြို့ပတ်ရထားအဆောက်အဦးဖြစ်ပါတယ်။ အကြင်သူသည်ဤအကင်းမျှော်ယူထားသောမိမိကိုယ်ကိုမြင်ကြခံရခြင်းမရှိဘဲအခန်းသည်လူအပေါင်းတို့ကို၏အပြုအမူကိုစောငျ့ရှောကျနိုငျသညျ။ ကင်းမျှော်အတွက်လူတစ်ဦး, အရှင်ထားတဲ့မွငျရသောပရောဖက်ဖြစ်ပါတယ် (Foucault 1995) ။ အချို့ privacy ကိုထောက်ခံသူတွေကို, ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်နည်းပညာကုမ္ပဏီများနှင့်အစိုးရများအစဉ်မပြတ်စောင့်ကြည့်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြုအမူ recoding နေကြသည်ဘယ်မှာ panoptic ထောင်ထဲသို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
ပုံ 6.3: ပထမဦးဆုံးဂျယ်ရမီ Bentham အားဖြင့်အဆိုပြုထားသည့် panopticon ထောင်ထဲမှာများအတွက်ဒီဇိုင်း။ ဗဟိုမှာတော့လူတိုင်း၏အပြုအမူကိုစောငျ့ရှောကျနိုငျပါပေမယ့်လေ့လာတွေ့ရှိရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတစ်ဦးမွငျရသောပရောဖက်လည်းမရှိ။ Willey Reveley, 1791 (: Source ခြင်းဖြင့်ဆွဲ Wikimedia Commons ) ။
များစွာသောလူမှုရေးသုတေသီများဒီဂျစ်တယ်ခေတ်ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာနည်းနည်းနောက်ထပ်ဒီဥပစာသယ်ဆောင်ရန်, သူတို့အပြုအမူစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်များနှင့်အရေးကြီးသောသုတေသနအမျိုးမျိုးတို့ကိုပြုပါရန်အသုံးပြုနိုင်မယ့်မာစတာဒေတာဘေ့စအတွက်ကင်းမျှော်၏အတွင်းပိုင်းသူတို့ကိုယ်သူတို့မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ယခုမူကား, အစားကင်းမျှော်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ကူးယဉ်ထက်, ဆဲလ်များထဲမှတစ်ခုအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ အဲဒီမာစတာဒေတာဘေ့စသည်ပေါလုအုမ်းအဘယ်အရာနှင့်တူကြည့်ဖို့စတင်သည် (2010) သိက္ခာမဲ့နည်းလမ်းတွေများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည့်ပျက်စီးခြင်း၏ဒေတာဘေ့စခေါ်ခဲ့သည်။
ဤစာအုပ်၏အချို့စာဖတ်သူများသူတို့တာဝန်သိသူတို့ရဲ့ဒေတာကိုသုံးပါရန်နှင့်ရန်သူတို့အထဲကကကာကွယ်ပေးဖို့ဟာသူတို့ရဲ့မွငျရသောဗျာဒိတ်ခံယုံကြည်စိတ်ချရှိရာနိုင်ငံများတွင်အသကျရှငျဖို့လုံလောက်တဲ့ကံကောင်းဖြစ်ကြသည်။ အခြားစာဖတ်သူများဒီတော့ကံကောင်းမဟုတ်, ငါအစုလိုက်အပြုံလိုက်စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့်ကြီးပြင်းလာကိစ္စများသူတို့ကိုရန်အလွန်ရှင်းလင်းသောဖြစ်ကြောင်းသေချာပါတယ်။ မျှော်လင့်အလယ်တန်းအသုံးပြုမှု: သို့သော်လည်းငါသည်ပင်ကံကောင်းစာဖတ်သူတွေအတွက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့်ကြီးပြင်းလာအရေးပါသောစိုးရိမ်ပူပန်နေဆဲရှိကွောငျးယုံကြည်ပါတယ်။ အကြောင်း, တစ်ဦးရည်ရွယ်ချက်-ဆိုသညျကားတနေ့ဟာအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးပြုရန်ကြော်ငြာတွေ-တန်ခိုးပစ်မှတ်ထားဖန်တီးနေတဲ့ဒေတာဘေ့စဖြစ်ပါတယ်။ မျှော်လင့်အလယ်တန်းအသုံးပြုမှုတစ်ဦးကကြောက်မက်ဖွယ်ဥပမာအားဒုတိယကမ်ဘာအစိုးရသန်းခေါင်စာရင်းဒေတာယုဒလူတို့ဆန့်ကျင်ရာအရပ်ကိုယူသောလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်သည့်အခါစစ်ပွဲ, ရိုးမားနှင့်အခြားကာလအတွင်းဖြစ်ပျက် (Seltzer and Anderson 2008) ။ ငြိမ်းချမ်းသောကြိမ်အတွင်းဒေတာစုဆောင်းသူစာရင်းအင်းပညာရှင်များနီးပါးဆက်ဆက်ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်ရှိခဲ့နှင့်များစွာသောနိုင်ငံသားများတာဝန်သိဒေတာသုံးစွဲဖို့သူတို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချရ။ ဒါပေမယ့်ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲပစ်-သောအခါနာဇီဆီသို့ရောက် လာ. , အာဏာသည်ဤဒေတာကိုမျှော်မှန်းဘယ်တော့မှခဲ့တဲ့အလယ်တန်းအသုံးပြုမှုကို enabled ။ မာစတာဒေတာဘေ့စတည်ရှိတစ်ချိန်ကအတော်လေးရိုးရှင်းစွာ, အဲဒါကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်မည်သို့အသုံးပြုပါလိမ့်မည်ရရှိစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်မျှော်လင့်ရန်ခက်ခဲသည်။ တကယ်တော့ဝီလျံ Seltzer နှင့် Margo Anderson က (2008) လူဦးရေဒေတာစနစ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သို့မဟုတ်အလားအလာလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ (စားပွဲ 6.1) တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြသည့်အတွက် 18 အမှုပေါင်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်။ Seltzer နှင့် Anderson ကထောက်ပြအဖြစ်အများဆုံးချိုးဖောက်မှုများလျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်ပျက်နေသောကြောင့်နောက်ထပ်, ဤစာရင်းနီးပါးဆက်ဆက်တစ်ဦးအထင်သေးပါတယ်။
စားပွဲတင် 6.1: ပြည်သူ့အင်အား Data Systems ပါဝင်သို့မဟုတ် Potentially လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည့်မှုများ။ Seltzer နှင့်အန်ဒါဆင်ကိုကြည့်ပါ (2008) တစ်ဦးချင်းစီအမှုနှင့်ပါဝင်စံနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကဘို့။ မျှော်လင့်အလယ်တန်းအသုံးပြုမှုကိုပါဝင်ပတ်သက်သည်ဤအမှုများကို၏အချို့, ဒါပေမယ့်အားလုံးမဟုတ်။
သြစတြေးလျ 19 နှင့် 20 ရာစုအစောပိုင်း တိုင်းရင်းသား လူဦးရေမှတ်ပုံတင် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု၏အတင်းအဓမ္မရွှေ့ပြောင်း, ဒြပ်စင်
တရုတ်နိုင်ငံ 1966-76 ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းဆိုးရွား-class ကိုဇာစ်မြစ် လူဦးရေမှတ်ပုံတင် အတင်းအကျပ်ရွှေ့ပြောင်း, ပယောဂလူအုပ်စုအကြမ်းဖက်မှု
ပြင်သစ် 1940-44 ယုဒလူတို့ လူဦးရေမှတ်ပုံတင်, အထူးသန်းခေါင်စာရင်း အတင်းအကျပ်ရွှေ့ပြောင်း, လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု
ဂျာမနီ 1933-45 ယုဒလူတို့ရိုးမားနှင့်အခြား များပြားသော အတင်းအကျပ်ရွှေ့ပြောင်း, လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု
ဟန်ဂေရီ 1945-46 ဂျာမန်နိုင်ငံသားများနှင့်ဂျာမန်မိခင်ဘာသာစကားသတင်းပို့ရှိသူများ 1941 လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူ အတင်းအကျပ်ရွှေ့ပြောင်း
နယ်သာလန် 1940-44 ယုဒလူ, ရိုးမား လူဦးရေမှတ်ပုံတင်စနစ်များ အတင်းအကျပ်ရွှေ့ပြောင်း, လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု
နော်ဝေ 1845-1930 Sami နှင့် Kven လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်း တိုင်းရင်းသားရေးရာသန့်စင်
နော်ဝေ 1942-44 ယုဒလူတို့ အထူးသန်းခေါင်စာရင်းနှင့်အဆိုပြုထားသောလူဦးရေမှတ်ပုံတင် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု
ပိုလန် 1939-43 ယုဒလူတို့ အဓိကအားဖြင့်အထူးသန်းခေါင်စာရင်း လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု
ရိုမေးနီးယား 1941-43 ယုဒလူ, ရိုးမား 1941 လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူ အတင်းအကျပ်ရွှေ့ပြောင်း, လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု
ရဝမ်ဒါ 1994 Tutsi လူဦးရေမှတ်ပုံတင် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု
တောင်အာဖရိက 1950-93 အာဖရိကနှင့် "အသွေးအရောင်စုံ" လူဦးရေ 1951 ခုနှစ်လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူနှင့်လူဦးရေမှတ်ပုံတင် အသားအရောင်ခွဲခြား, မဲဆန္ဒရှင် disenfranchisement
ယူနိုက်တက်စတိတ် 19 ရာစု native အမေရိကန်တွေ အထူးသန်းခေါင်စာရင်း, လူဦးရေမှတ်ပုံတင် အတင်းအကျပ်ရွှေ့ပြောင်း
ယူနိုက်တက်စတိတ် 1917 သံသယဖြစ်ဖွယ်ဥပဒေမူကြမ်းချိုးဖောက် 1910 သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူ မှတ်ပုံတင်ရှောင်ရှားသူတို့၏အမျိုးအစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနှင့်တရားစွဲဆိုမှု
ယူနိုက်တက်စတိတ် 1941-45 ဂျပန်အမေရိကန်တွေ 1940 သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူ အတင်းအကျပ်ရွှေ့ပြောင်းနှင့်နိုင်ငံတကာ
ယူနိုက်တက်စတိတ် 2001-08 သံသယဖြစ်ဖွယ်အကြမ်းဖက်သမားများ NCES စစ်တမ်းများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဒေတာ ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်သမားများ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနှင့်တရားစွဲဆိုမှု
ယူနိုက်တက်စတိတ် 2003 အာရပ်-Americans တွေ 2000 သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူ အမည်မသိ
ရုရှားနိုင်ငံ 1919-39 လူနည်းစုလူဦးရေ အမျိုးမျိုးသောလူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်း အတင်းအကျပ်ရွှေ့ပြောင်းအခြားလေးနက်သောပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်မှ
သာမန်လူမှုရေးသုတေသီများသိပ်ကိုဝေးအလယ်တန်းအသုံးပြုမှုမှတဆင့်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများအတွက်ပါဝင်တူသောဘာမှထံမှဖြစ်ကြသည်။ ငါသည်သင်လူအခြို့ကသင်၏အလုပ်တုံ့ပြန်မယ်ဘယ်လိုနားလည်ကူညီပေးပါမည်ထင်သောကွောငျ့, သို့သော်, ဆွေးနွေးရွေးချယ်ပါတယ်။ ရဲ့ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်, အရသာ, ဆက်ဆံရေးနှင့်အချိန်စီမံကိန်းကိုထံသို့ပြန်လာကြကုန်အံ့။ အတူတူဟားဗတ်ကနေပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့် granular ဒေတာတွေနဲ့ Facebook မှာထံမှပြည့်စုံခြင်းနှင့် granular data တွေကိုပေါင်းစည်းခြင်းအားဖြင့်, သုတေသီလူမှုရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကျောင်းသားများ၏အသက်တစ်ခုအံ့သြလောက်အောင်ကြွယ်ဝသောအမြင် created (Lewis et al. 2008) ။ များစွာသောလူမှုရေးသုတေသီများစေရန်, ကောင်းမွန်သောဤအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည့်မာစတာဒေတာဘေ့စတူပုံရသည်။ ဒါပေမဲ့တချို့အခြားသူများကြောင့် unethical ကိုအသုံးပြုနိုင်သည့်ပျက်စီးခြင်း၏ဒေတာဘေ့စရဲ့အစ, နဲ့တူလှပါတယ်။ တကယ်တော့ဒါဟာဖြစ်ကောင်းနှစ်ဦးစလုံး၏တစ်နည်းနည်းဖြစ်ပါတယ်။
အစုလိုက်အပြုံလိုက်စောင့်ကြည့်ဖို့အပြင်, သုတေသီများ-နောက်တဖန်ကုမ္ပဏီများနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. ပိုမိုကျပန်းထိန်းချုပ်စမ်းသပ်ချက်ဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက်လူတွေရဲ့ဘဝအသက်တာ၌ကြားဝင်အစိုးရများ-နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, စိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက်အတွက်သုတေသီများဟာသူတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်သို့မဟုတ်အသိအမြင်မပါဘဲစမ်းသပ်မှုတစ်ခုအတွက် 700,000 လူတွေကိုစာရင်းသွင်း။ ငါအခနျးကွီး4ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း, စမ်းသပ်ချက်သို့တက်ရောက်လာသူများ၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုစစ်မှုထမ်းဒီလိုမျိုးဆန်းမဟုတ်ပါဘူး, ထိုသို့ကြီးမားသောကုမ္ပဏီကြီးများ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမလိုအပ်ပါဘူး။ တကယ်တော့, အခနျး4မှာငါဘယ်လိုလုပ်ပေးရန်သင့်အားသွန်သင်ပေးခဲ့တယ်။
ဒီတိုးမြှင့်ပါဝါ၏မျက်နှာကိုခုနှစ်, သုတေသီများကိုက်ညီမှုများနှင့်ထပ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ, ဥပဒေများနှင့်စံချိန်စံညွှန်းမှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဒီမကိုက်ညီတစ်ခုမှာအရင်းအမြစ်ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်များ၏စွမ်းရည်များပိုမိုလျင်မြန်စွာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ, ဥပဒေများနှင့်စံချိန်စံညွှန်းထက်ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဥပမာ, အဖြစ်များသည့်စည်းမျဉ်း (United States မှာအများဆုံးအစိုးရငွေကြေးထောက်ပံ့သုတေသနအုပ်ချုပ်ခွင့်စည်းမျဉ်းများအစု) 1981 ကတည်းကအများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်မရှိသေးပေမကိုက်ညီ၏ဒုတိယအရင်းအမြစ်တွေဖြစ်တဲ့ privacy ကိုအဖြစ်စိတ္တဇသဘောတရားများကိုလှည့်ပတ်စံချိန်စံညွှန်းနေဆဲတက်ကြွစွာသုတေသီများအားဖြင့်အခြေအတင်ဆွေးနွေးလျက်ရှိသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ , မူဝါဒချမှတ်သူများ, နှင့်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ။ ဤဒေသများအတွက်အထူးကုတစ်ဦးယူနီဖောင်းများသဘောတူညီမှုမရောက်ရှိနိုင်လျှင်ကျနော်တို့ပင်ကိုယ်မူလသုတေသီများသို့မဟုတ်သင်တန်းသားများကိုအဲဒီလိုလုပ်ဖို့မျှော်လင့်ထားသင့်ပါဘူး။ မကိုက်ညီ၏တတိယနှင့်နောက်ဆုံးအရင်းအမြစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်-အသက်အရွယ်သုတေသန ပို. ပို. အလားအလာထပ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေမှဦးဆောင်သည့်အခြားအခင်းအကျင်းသို့ရောနှောကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, စိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက် Facebook ကိုမှာ data တွေကိုသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်ကော်နဲလ်ပါမောက္ခတစ်ဦးနှင့်ဘွဲ့ရကျောင်းသားအကြားပူးပေါင်းခဲ့သည်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကသူကနေသမျှကာလပတ်လုံးစမ်းသပ်ချက်ဝန်ဆောင်မှု၏ Facebook ရဲ့စည်းကမ်းချက်များကိုလိုက်နာအဖြစ်, Third-party ကြီးကြပ်ခြင်းမရှိဘဲကြီးမားစမ်းသပ်ချက်ကို run ဖို့ Facebook ကိုမှာဘုံဖြစ်ခဲ့သည်။ ကော်နဲလ်မှာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအတော်လေးကွဲပြားခြားနားသောပါ၏ လုံးဝနီးပါးအားလုံးစမ်းသပ်ချက်ဟာကော်နဲလ် IRB နေဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်အရာစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်စိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက်-Facebook ရဲ့သို့မဟုတ်ကော်နဲလ်ရဲ့အုပ်ချုပ်သင့်သလဲ အဲဒီမှာကိုက်ညီမှုများနှင့်ထပ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဥပဒေများ, ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, စံချိန်စံညွှန်းတောင်သုတေသီများဒုက္ခညာဘက်အရာလုပ်နေတာရှိစေခြင်းငှါကောင်းစွာ-အဓိပ္ပာယ်အခါ။ တကယ်တော့ကြောင့်မကိုက်ညီ၏ပင်တစ်ခုတည်းညာဘက်အရာမျှမရှိစေခြင်းငှါ, ။
ယေဘုယျအားဤနှစ်ခု features တွေ-တိုးပွားလာတန်ခိုးတော်နှင့်အာဏာဒီဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သုတေသီများအနာဂါတ်ကာလတွင်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရခံရဖို့သွားကြသည်ကိုအသုံးပြု-ယုတ်ဖြစ်သင့်ဘယ်လိုသဘောတူညီချက်မရှိခြင်း။ ဤစိန်ခေါ်မှုများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာကံကောင်းထောက်မစွာ, ကခြစ်ရာကနေစတင်နိုင်ရန်လိုအပ်ပါဘူး။ အဲဒီအစား, သုတေသီများယခင်ကဖွံ့ဖြိုးပြီးကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအခြေခံမူများနှင့်မူဘောင်ကနေလာမယ့်နှစ်ဦးကိုပုဒ်မများ၏အကြောင်းအရာများသည်ပညာကိုဆွဲနိုင်ပါတယ်။